ဖုန်း သုံးစွဲသူတွေဆောင်ထားသင့်တဲ့ - RAM Manager Free apk v: 8.0.6 - Min Oaker
Andriod Application ဖုန်း သုံးစွဲသူတွေဆောင်ထားသင့်တဲ့ - RAM Manager Free apk v: 8.0.6
ဖုန်း သုံးစွဲသူတွေဆောင်ထားသင့်တဲ့ - RAM Manager Free apk v: 8.0.6
by ပုသိမ်နည်းပညာ on 10:38 PM in Andriod Application
ဖုန်း သုံးစွဲသူတွေဆောင်ထားသင့်တဲ့ - RAM Manager Free apk v: 8.0.6 apk ကောင်းလေးပါ ဖုန်းသုံးစွဲ ကြာလာတာ နဲ့ အမျှ ဖုန်း RAM ကလေးလာပါတယ် တချို့  ဖုန်းတွေမှာ ဂိမ်းတစ်ခုကနေနောက်တစ်ခု
ပြောင်းဆော့ရင် စက်ဟမ်းလာပါတယ် အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်Ram memory ထဲမှာ ပထမဆော့တဲ့ ဂိမ်း Data ကျန်နေလို့ဖြစ်တာပါ အဲ့လိုတွေမဖြစ်အောင် RAM Manager Free apk လေးသုံးပြီး Data memory မကျန် အောင် Clean ပြီးဂိမ်းကိုပေါ့ပါးစွာဆော့ကစားနိုင်ပါပြီ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
This is lite version of RAM Manager Pro with limited features.
. RAM tuner
. Languages – English, Czech, Slovak, Korean, Italian, Croatian, Polish, French, Russian, Greek, Chinese, Simplified Chinese, Turkish, Spanish, Portuguese, Persian, Indonesian, Dutch
Pro version avilable on playstore.
Current Version : 8.0.6
Offered By : Juwe11